Dadka ku nool Marka oo ka wal walsan xaaladaha is bedelka iyo xiisadaha ka jira magaalada | shumis.net
Home » galmada » Dadka ku nool Marka oo ka wal walsan xaaladaha is bedelka iyo xiisadaha ka jira magaalada
Dadka ku nool Marka oo ka wal walsan xaaladaha is bedelka iyo xiisadaha ka jira magaalada
Shacabka ku nool magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka wal walsan is bedelada iyo xiisadaha ka jira magaalada, iyadoo dhinacyadii shalay ku dagaalamay magaalada ay labo dhinac ku kala sugan yihiin.
Xaalada magaalada Marka ayaa saaka ah mid degan, waxaa hakad ku jira dhaq dhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha, waxayna dadweynaha xalay maqribkii ku xaroodeen guryahooda.
Mid ka mid ah dadka deegaanka Xaafada Ruzia ayaa sheegaya in xalay magaalada lagu soo rogay Bandaw, ayna soo galeen ciidamo fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab, ayna ka cabsi qabaan in shacabka lagu dul dagaalamo.
Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay, markii ciidamadii deegaanka ay dib uga soo gurteen meelihii ay qabsadeen gelinkii hore.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Al-Shabaab ku sugan yihiin inta badan xaafadaha Marka, sida faras-magaalaha iyo xarumihii muhiimka ahaa ee magaalada.
Sidoo kale Ciidamada AMISOM ayaa ku sugan Sartii Ayuub ee xaafada Buulo-Jaan, sidoo kale ciidamada deegaanka iyo maamulka degmada ayaa iyana afaafka magaalada jooga.
Guddoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan Shabeellaha Hoose Abuu Cabdalla ayaa shalay gelinkii dambe meel fagaare kula hadlay dadweynaha reer Marka, isagoo ugu baaqay inay kala qeyb qaataan jihaadka, ayna dhamaatay xilligii dadka la isbaareysanayay, dagaaladii qabiilka iyo dhibaatooyinki kale ee shacabka lagu hayay.
Lama oga sida saakay isu bedeli karta mar kale xaalada magaalada, waxaana jira cabsi laga qabo in dagaalo ay dhacaan, maadaama labada dhinac ay isku hor-fadhiyaan magaalada gudaheeda.
Title: Dadka ku nool Marka oo ka wal walsan xaaladaha is bedelka iyo xiisadaha ka jira magaalada